Ao Azerbaidjana, nandrehitra indray ny resaka momba ny herisetra an-tokantrano ny nahafatesan’ny vehivavy tanora iray · Global Voices teny Malagasy
Tamin'ny Febroary, telo ireo vehivavy namono tena tao amin'ny firenena
Nandika (fr) i Camille Horriot
Voadika ny 31 Marsa 2021 15:18 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Ελληνικά, عربي, Français, русский, Türkçe, English
« Mila fototra araka ny lalàna iray mazava tsara ny ady atao amin'ny herisetra manjo ny vehivavy », hoy ny ao amin'ny parlemanta eorôpeàna. Sary nampiasàna ny lisansa CC BY-NC-ND 2.0.
[Raha tsy asiana fanamarihana manokana dia mankany amina lahatsoratra amin'ny fiteny anglisy daholo ny rohy ato.]
Sevil Atakishiyeva dia ankizivavy 20 taona mpianatra tao amin'ny oniversite azerbaidjanezy momba ny Fizahantany sy ny Fitantanana. Toy ny ankamaroan'ireo vehivavy tokantena any Azerbaidjana, miara-mipetraka amin'ireo ray aman-dreniny izy. Saingy nanonofy ny hikopak'elatra honina any ivelany sy hanao ny fiainany manokana. Ny 18 Febroary anefa, namono tena i Sevil.
Efa in-droa, ny 2019 sy 2020, i Sevil no nifandray tamin'i Gulnara Mehdiyeva, mpanorina ny fikambanana feminista iray ao an-toerana. Naborany taminy fa mila vaniny sy manao herisetra aminy ny fiankaviany, nohazavainy fa norahonan'ny rainy hovonoina ho faty izy raha manao fihetsika tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy, nampiany hoe homeny vola be ny polisy mba tsy hisian'ny fanadihadiana.
Tany anaty fifanakalozana [az] nozarain'i Gulnara tao amin'ny Facebook taorian'ny famonoantena nataon'i Sevil, nanoratra ilay tovovavy hoe : « raha misy zava-manjo ahy, aza adino ireo hafatro ireo ».
Nitety ny aterineto ilay zavatra nosoratan'i Gulnara ary nanomboka teo, lasa isan'ireo lohahevitra noresahana be indrindra tao amin'ny Twitter ny tenifototra #sevilüçünsusma (ho an'i Sevil, poteho ny fahanginana). Ho an'ireo vehivavy Azeris marobe, zavatra efa mahazatra ny tantaran'i Sevil. Betsaka amin-dry zareo no niaina herisetra ara-batana sy ara-tsaina avy amin'ny olona iarahany miaina, nefa koa ny anadahy, ny ray aman-dreny sy rafozana.
Ireto ambany ireto ny sasantsasany amin'ireo bitsika fanehoankevitra tamin'ny nahafatesan'i Sevil sy tamin'ilay lahatsoratra navoakan'i Gulnara :
Eto amin'ity firenena ity, raha te-hiaina ankalalahana ny sipakely, dia lazaina fa makorely. Eto amin'ity firenena ity, tsy misalasala ny rainy miteny amin-janany vavy fa hovonoiny raha vao manao hadisoana kely eo. Eto amin'ity firenena ity, toy ny fànaka an-trano no fiheveran'ireo ray aman-dreny ny zanaka naterany. Mandria am-piadanana ry anjely kely.
Indraindray, miezaka aho maka sary ao an-tsaina ny haavon'ny hadisoam-panantenana manosika ny olona iray hamono ny tenany ka ny loko omen'ny eitreritro ho ahy dia tontolo iray manjombona be izay toa ny fahafatesana no hany tara-pahazavana tsinjo. R.I.P. SEVIL
Tokony ho menatra ianareo manosika avy eny amin'ny rihana faha-20 ireo nofinofy sy fanantenan'ny olona iray tena mbola anatin'ny hatanorany tanteraka.
Ny tena henjana eto amin'ity tontolo ity, dia ny hoe vehivavy ianao, na ankizy, na biby.
Nozarain'ireo mpikatroka ihany koa ireo pikantsary avy amin'ireo hafatra nalefan'ny vehivavy izay manamafy fa niharan'ny herisetra an-tokantrano :
Navoakan'i Seymour Nazar tamin'ny Alahady 21 Febroary 2021 [az]
Arahaba, tsy metimety aho. Kivy. Tsy misaina afa-tsy ny hamono tena. Tsy mahita zavatra hafa ankoatra izay. Iharan'ny herisetra sy ny fanaovana antsojay aho. Anontaniana ahy isanandro raha te-hanao makorely aho, satria manao ankosotra. Tsy tantiko intsony. Afaka manampy ahy ve ianao ?
Sevil no vehivavy fanintelony namono tena tao Azerbaidjana tamin'ny Febroary 2021.
Ny 22 Febroary, nanokatra fanadihadiana ny biraon'ny fampanoavana, nanenjehana ny rain'i Sevil ho “nanosika olona hamono tena”, araka ny andininy faha 125 amin'ny lalàna famaizana ao Azerbaidjana.
Kanefa, nolavin'i Samir Atakisiyev ireo fanambaràna nataon'ny zanany vavy, izay milaza fa nandrahona azy na nidaroka azy izy. « Raha olona mpisetrasetra, mahery setra aho, tsy ho navelako namita ny fianarany izy. Mety ho taona iray na roa ihany izy no nianatra, dia taorian'izay, najanona an-trano », hoy izy [az] tamin'ireo mpanao gazety. Nampiany ihany koa hoe : « eny, tezitra tokoa aho rehefa tratra aorian'ny fetra fodiana alina napetraka ho azy izy vao mody, saingy tsy nahery setra velively aho. »
Araka ny Kaomitim-Panjakana momba ny Antontanisa ao Azerbaidjana, trangana herisetra an-tokantrano niisa 1.180 raha kely indrindra no nandefasan'ireo vehivavy tatitra tamin'ny 2020. Tamin'ny 2019, nisy 1.039. Azo eritreretina hoe mbola betsaka lavitra noho ireo ny tena tarehimarika, tsy dia misy mitoroka loatra ny trangana herisetra an-tokantrano.
Telo monja ireo toeram-pialofana ho an'ireo niharan'ny herisetra an-tokantrano ao Azerbaidjana, firenena iray misy mponina 10 tapitrisa.
Misy ihany koa lalàna iray efa 11 taona manohitra ny herisetra an-tokantrano, saingy zara raha ampiharina izy io. Ho an'ireo mpikatroka, “tsy manao ny asany ” ny Kaomity ho an'ny Fianakaviana, ny Vehivavy ary ny Ankizy.
Tato anatin'ny taona maromaro, notakian'ireo mpikatroka i Azerbaidjana hanasonia ilay Fifanarahan'i Istanbul, fifanarahana iray nifanaovan'ireo firenena eorôpeàna mijoro hisoroka ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ho fampitsaharana ny tsimatimanota sitrahan'ireo nahavita ilay herisetra. Araka ny voalazan'ilay fifanarahana, izay ny mpifanolo-tànana amin'ny Azerbaidjana, Tiorkia no isan'ny tena nanamafy azy, tsy maintsy tanterahan'ireo mpanao sonia ny fanangonana tsy tapaka ao anaty fepotoana voafaritra ireo antontanisa ofisialy mahakasika ireo heloka notanterahana noho ny maha-lahy na maha-vavy, ary ny fanomezana ho an'ireo niharan'izany ny onitra ara-bola tandrify azy.
Anton-dresaka misafotofoto be ao Azerbaidjna ilay Fifanarahan'i Istanbul, indrindra fa tanisainy ao anatiny ny zon'ireo olona mitovy nefa mivady. Ao amin'io firenena io, mazàna ireo mpifikitra amin'ny nentindrazana no manohana ny hevitra hoe ny fanaovana sonia fifanarahana tahaka iny dia mitondra mankany amin'ny “faharavàn'ny” soatoavina Azeris.
Mandrava ny fady
Tato anatin'ny taona vitsivitsy farany, marobe ireo vehivavy Azeris no nampiasa ny tambajotra sôsialy mba hizaran-dry zareo ny zavatra niainany ny atao hoe herisetra an-tokantrano, izay nandrisika ireo vehivavy hafa hanao tahaka izany koa.
Tamin'ny 2019, Seljan Yagmur, tovovavy 18 taona, dia nizara tao amin'ny Facebook lahatsoratra iray momba ny herisetra nataon'ny rainy tamin'ireo vehivavy tao anivon'ny fianakaviany. Nisy ireo vehiavy hafa nanaraka ny diany ary nizara ny tantaran-dry zareo tamin'ny fampiasàna ny tenifototra #‎qadınaşiddətəson‬ (« atsaharo ny herisetra atao amin'ny vehivavy ») sy #‎Leylaüçünsusma (manondro ilay vehivavy iray hafa maty novonoina tany Bakou).
Ao Azerbaidjana, firenena mpifikitra amin'ny nentindrazana, heverina ho toy ny resaka manokana mihitsy izany herisetra an-tokantrano izany, saingy ny fahasahian'ny vehivavy iray dia nandrisika maro hafa hiampanga ireo herisetra atao noho ny maha-lahy na maha-vavy.
Ny 4 Febroary, nisy vondrona kely iray ivondronan'ireo vehivavy nikarakara fihetsiketsehana iray nanoloana ny tranon'ny governemanta tao Bakou, tamin'ny fanandratana afisy lehibe iray : « politika ny famonoana vehivavy ». Fahafatesana iray tafahoatra nanampy ireo efa niharan'ny herisetra an-tokantrano no nahatonga ilay fihetsiketsehana : Banu Maharramova, 32 taona, novonoin'ny rafozan-dahiny tamin'ny fomba feno habibiana, hoy ny tatitry ny pôlisy. Tanaty harona fasiana fako no hita ny vatana voatetitetik'ilay niharam-pahavoazana. Avy hatrany dia naparitaky ny pôlisy ireo vehivavy nanao hetsipanoherana.
Ny 8 Martsa 2020, tao Bakou renivohitra, naparitaky ny pôlisy ihany koa ny hetsipanoherana iray hafa nanamarika ny andro erantany ho an'ny zon'ny vehivavy. Niverina nitranga ny toy izany tamin'ny Oktôbra 2019, nandritra ny hetsipanoherana am-pilaminana izay nitakiana ny hampiatoana ny herisetra atao amin'ireo vehivavy.
Mandritra izany, maloka be ny tena zavamisy iainana eny an-kianja. Raha mbola tsy arovan'ny lalàna misy sy manankery ireo niharam-pahavoazana tamin'ny herisetra sy ny fanaovana antsojay, mbola hitohy ho hita anaty lohateny vaventy ireo tantara toy ny an'i Sevil.
Ny rarintsaina tsy voatsabo no voalohany mitondra amin'ny famonoantena. Rehefa tsaboina ny rarintsaina, azo sorohana ny famonoantena. Azonareo atao ny mahazo fanohanana amin'ny alàlan'ireo antso an-telefaona ho fanohanana ireo olona ahiana hamono tena na ireo tratry ny olana ara-toepo. Tsidiho ny Befrienders.org hahitanao ny laharana fihainoana mba ho fisorohana ny famonoantena any amin'ny firenena ipetrahanao.
Amerika Latina 10 ora izay